Weather in Thailand in June ~ Journey-Assist - Vanim-potoana. Orana. Aiza no haleha
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand amin'ny Jona
Weather in Thailand amin'ny Jona
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra, manomboka ny taom-baovao manomboka any Thailand, ny orana mony. Ity endrika mampiavaka ny firenena ity dia mametraka ny gadona fiainana ho an'ny mponina sy mpizahatany any an-toerana. Na dia any amin'ny ankamaroan'ny firenena ao amin'ny faritra avaratra atsinanana aza dia manomboka ny andro fialantsasatra amin'ny ranomasina, ny orana no manomboka ny orana ary mihena ny fandehanan'ireo mpizahatany. Tamin'ny volana jona, ny mononika atsimo atsinanana dia manarona ny faritany manontolo ao amin'ny firenena, izay fotoana ahafahan'ny orana tropikaly any amin'ny zoron-tany rehetra.
Ny vinan'ny toetr'andro ho an'ny volana jona ho an'ireo faritany avaratra dia hahafaly ireo mpizahatany fotsiny izay mikasa ny handany ny fiandohan'ny fahavaratra amin'ny faritr'i Chiang Rai na Chiang Mai, satria ny isan'ny orana amin'ny volana Jona dia tsy mihoatra ny 10%. Amin'ity tranga ity, somary ambany noho ny volana Mey ny mari-pana eo amin'ny rivotra mandritra ny andro, eo amin'ny +31 degre. Amin'ny alina, tondraka ny rivotra tsy mihoatra ny 5-7 degre.
Any amin'ny faritany afovoan-tany sy any Bangkok, ny rivotra mando feno fifamoivoizana dia mifehy ny toetrandro tanteraka, avy hatrany ny orana, indraindray, ary matetika dia malefaka sy mafana. Na dia amin'ny andro feno rahona aza ny lanitra, dia mahatratra hatramin'ny +32 degre ny rivotra. Any Pattaya sy amin'ireo nosy any amin'ny morontsiraka avaratry ny Hoalan'i Thailand, ny toetr'andro dia tsy mitovy amin'ny toetrandro any Bangkok, ny hamandoana eto ihany no mety ho avo kokoa, ny fiasan'ny ranomasina no misy fiantraikany. Mijanona ho mafana ny rano ao an-kavoana, eo ho eo amin'ny +30 degre, fa ny hita ivelany kosa dia toa tsy mahasarika ny ranomasina: ny lokon'ny rano malemilemy mankamin'ny faravodilanitra izay rakotra rahona ambany.
Any atsimo kely amin'ny morontsiraky ny Hoalan'i Thailand, any Samui sy Pananga, malemy ny monsoon: misy andro mafana kokoa ary avy ny orana isaky ny 3-4 andro. Amin'ny tolakandro, ny thermometer dia mampiseho +31 degre, ny mari-dranomasina dia +30 degre.
Any andrefany, eo amoron'ny Ranomasin'i Andaman, ny fihanaky ny rivotra mando mando dia mampiseho amin'ny voninahiny rehetra. Maherin'ny antsasaky ny andro amin'ny volana no misy orana, ary ny andro sisa dia amin'ny rahona matevina. Ny tsy fandriampahalemana kely izay nitranga tamin'ny volana Mey, tamin'ny volana jona, afaka nitombo rivo-mahery mahery aho ary nifofofofo be ny rano avy tany an-danitra. Na dia mandritra ny oram-be aza, dia tsy milatsaka ambanin'ny +30 degre ny mari-pana. Angamba ny toetr'andro tahaka izany, rehefa misy hafanana sy avo ny hamandoana dia sarotra indrindra ny miaritra amin'ny olona voan'ny aretim-po.
Endrika fitsaharana amin'ny volana Jona
Na eo aza ny mampiavaka ny toetran'ny firenena amin'ny fiandohan'ny fahavaratra, ny olona iray dia tsy tokony hatahotra amin'ny fotoanan'ny orana. Ny fialantsasatra any Thailand dia tokony afindra amin'ny vanim-potoana hafa ihany ho an'ireo izay te hahazo fialan-tsasatra tena tonga lafatra. Mampalahelo fa tsy afaka hanome antoka tsara sy toetr'andro mahafinaritra ny volana jona, na izany aza, mandritra io fotoana io, dia afaka mahazo tombony hafa maro hafa. Ohatra, ny vidin'ny haingana ho an'ny sidina sy ny trano fandraisam-bahiny. Amin'ny volana Jona, mety hihena 50% ny vidin'izy ireo!
Ankoatra ny fialan-tsasatra mora kokoa amin'ny fiandohan'ny fahavaratra, dia afaka mahazo ranomasina ny voankazo vaovao ianao eto amin'ny firenena. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny orana izay manomboka ny fijinjana ny voankazo sesitany, ho fankalazana ny fialantsasatra manontolo sy ny fety. Ny vidin'ny ankamaroan'ny voankazo eny an-tsena dia mahatratra ambaratonga mampihomehy, ary izany dia fotoana iray tsara hahafahantsika mankafy ny harena mahasoa ao amin'ny firenena mitsiky!
Aiza ny fialan-tsasatra tena tsara indrindra any Thailandy amin'ny volana jona?
9 andro (118.0 mm.)
16 andro (283.8 mm.)
7 andro (84.7 mm.)
7 andro (98.2 mm.)
11 andro (173.4 mm.)
16 andro (283.7 mm.)
16 andro (284.2 mm.)
7 andro (92.2 mm.)
14 andro (270.4 mm.)
16 andro (284.1 mm.)
21 andro (643.7 mm.)
15 andro (329.1 mm.)
11 andro (169.7 mm.)
13 andro (203.4 mm.)
9 andro (136.0 mm.)
21 andro (645.2 mm.)
29.0 ° C
19 andro (372.4 mm.)
9 andro (137.6 mm.)
21 andro (624.9 mm.)
12 andro (174.7 mm.)
7 andro (98.0 mm.)
7 andro (98.9 mm.)
15 andro (284.8 mm.)
16 andro (285.0 mm.)
9 andro (95.6 mm.)
9 andro (141.9 mm.)
15 andro (285.2 mm.)
11 andro (168.7 mm.)
7 andro (86.7 mm.)
7 andro (90.6 mm.)
9 andro (137.4 mm.)
13 andro (225.8 mm.)
16 andro (284.8 mm.)
17 andro (303.6 mm.)
8 andro (104.3 mm.)
14 andro (269.5 mm.)
6 andro (82.8 mm.)
11 andro (139.5 mm.)
7 andro (98.5 mm.)
21 andro (622.5 mm.)
8 andro (101.2 mm.)
11 andro (115.6 mm.)
11 andro (119.7 mm.)
7 andro (98.1 mm.)
4 andro (67.5 mm.)
12 andro (154.2 mm.)
7 andro (98.3 mm.)
11 andro (129.3 mm.)